अचम्मको देश, बिचरा जनता
रवीन्द्र फुँयाल मंगलबार, चैत १८, २०७६, १०:५८
भारतको धारचुलामा अलपत्र नेपाली
यतिखेर विश्वभर ठूलो तरंग र त्रास छाइरहेको छ। कोरोना भन्ने जैविक शक्तिले सबै देशहरुमा धावा बोलिरहेको अवस्था छ। यतिखेर यस्तो अनुभब हुँदै छ कि कतै पृथ्वी घुम्न त रोकिएको छैन। यस्तो लाग्नु पनि स्वभाविक नै हो।
ठूल्ठूला उद्योग, कल कारखाना, बजार अनि सबै सडक रित्तै छन्। मानवीय आत्मियताको दूरी बढ्दैछ। एक अर्कासँग भेट हुन नपरे हुन्थ्यो। म यो रोगबाट बच्न पाए हुन्थ्यो। धेरैलाई यस्तै लागिरहेको छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा डरैडरले बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
कुरा गरौं अब देश नेपालको, जसको मुख्य आयस्रोत नै विदेशिएका नागरिकबाटै छ। तर, न त रेमिट्यान्सलाई उचित प्रयोग गरेर मुलुकलाई आहा! भन्न गरी परिवर्तन नै गराउन सके, न त विदेशिएका नागरिकलाई सुविधा र सम्मान नै दिन सके।
कुनै पनि देशको नागरिक वैदेशिक रोजगारमा मुलुकको मातहतमा जान्छ भने भोलि भैपरी आउँदा, कुनै आपत्ति आउँदा आफ्नो नागरिकलाई मुलुक फर्काउने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने हो। उनीहरुको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने हो। संकटमा परेका, रोजगार गुमाएका, पीडित र समस्यामा परेर म मेरो देश नेपाल फर्कन्छु भन्नेलाई नेपाल फर्कन र उसको उपचार नेपालमा गराउनु सरकारको दायित्व हो।
‘आपतमा परेका छौं भने आफ्नै घर आऊ, फर्केर नेपालै आऊ, सरकारले तिमीहरुको व्यवस्था मिलाउँछ’ भन्ने कि ‘होइन हामी जिम्मा लिन सक्दैनौं, जो जहाँ छ त्यहीँ बस’ भन्ने हो?
नेपालको नागरिकलाई अर्को मुलुकले किन हेरिदेओस्? जबकि, उसकै देशका नागरिकलाई बचाउन उसलाई हम्मे परेको छ।
हुन त, सरकारले यसबाहेक अरु सबै राम्रै गरिरहेको छ। भुकम्प आउँदा जस्तो अस्तव्यस्त छैन। किनकि, यसमा योजना बनाउन र सतर्क हुन पर्याप्त समय नेपाल सरकारसँग थियो।
अचम्मको देश र त्यहाँको बिचरा जनता, जबकि सरकारले नेपाल जानलाई आफ्नै नागरिकलाई समेत रोक लगाएको बेला, जापानबाट नेपाल सरकारलाई यस रोग विरुद्ध लड्न आर्थिक सहयोग गर्दा मलाई नेपाली नागरिक हुनुमा गर्व लाग्छ। अनि के भन्ने सरकारलाई? जसको तँ मुख हेर्न पनि चाहन्नस्, उसकै आर्थिक सहयोगले देश र जनताको सेवा गर भन्ने? के विदेशिएका नेपालीचाहिँ सौतेनी आमाका छोरा हुन् र?
(तपाईंहरुलाई पनि कोरोनासँग जोडिएका विविध सन्दर्भमा आफ्नो धारणाअभिव्यक्त गर्नुपरेमा वा फोटो तथा भिडियो प्रकाशन-प्रशारण गर्नुपरेमा नेपाल लाइभको 'नागरिक-नेपाल लाइभ' सहकार्यमा जोडिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सामाग्री https://www.facebook.com/nepallive1 म्यासेज लेख्न वा hellonepallive@gmail.com मेल गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।)